[Ikhaya loMculo lokuPhilisa eKhaya] Ulwandle lubambisene neHD yokubonisa/Indlela yeJida Lovers/Izibuko laseGongbei/Idama lokuqubha eLwandle/IPosi yothando/iOpera House/iBhulorho yaseHong Kong-Zhuhai-Macao
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe ongu爱豆
[IHolide yokuPhilisa eKhaya[ONEDAY&Rock Music] Iqula lokuqubha eLwandle/Iholide yaBucala/Ukuleqa iProjekthi yeHD
Inqaku elikhethekileyo: kuphela iirenti zexesha elide zixhaswa ngoJuni. Nceda uqhagamshelane nenkonzo yabathengi ngexabiso lokubhukisha inyanga yonke. Ezinye izindlu eziphantsi kwegama lam zikwayirenti yexesha elide yenyanga yonke kaJuni. Wamkelekile ukucofa i-avatar yam ukujonga ezinye izintlu, ixabiso lesaphulelo esikhulu :)
Umculo weBeatles ngowokuphela komculo ongavakaliyo ungathandekiyo nangaliphi na ixesha, nayiphi na indawo, nayiphi na iminyaka, nayiphi na imo, nasiphi na isini, naluphi na uhlanga, okanye nasiphi na isazisi.
Umculo weeBeatles ufana nencwadi engobomi kum, kuquka ixesha, uthando, kunye nemibono.Le ncwadi ibonakala ingqindilili kakhulu, kodwa eneneni yinkqubo, ebizwa ngokuba yi-accumulation. Ndibe nethamsanqa elikhulu lokudibana neqela elinje.Nangona lingekho ngexesha kunye nendawo enye, lindikhaphe imini nobusuku...
Ke ngoko, saphehlelela i-ROOM3 [I-Beatles Music Theme Homestay]
Le ndlu ixhotyiswe ngembonakalo ephezulu, indawo yokulala eneenkwenkwezi ezintlanu, kunye nezinto zangasese ezisuka kumazwe angaphandle. Igumbi lineefestile ezisezantsi ukuya kwisilingi, kwaye umbono wesitrato ungaphandle.Kukulungele kakhulu ukuhamba ukuya elunxwemeni ngemizuzu emi-5, ukuya eZhuhai Fisher Girl, i-lighthouse, ilanga nenyanga, kunye nokuthatha imifanekiso. yeHong Kong-Zhuhai-Macao Bridge.
emmm...... Ungaphoswa yile ndawo yokuhlala ikhethekileyo emhlabeni.
4.83 · Izimvo eziyi-63
Le ndlu ikwisithili seshishini sikaJida esingasetyenzwanga: Isixeko saseJiuzhou, iivenkile ezithengisa izinto ezingenamsebenzi, iTimes Square, zonke zingaphakathi komgama wokuhamba, imizuzu emi-5 ukusuka elunxwemeni lokuhlambela lolwandle, ipaki yolwandle, iShijingshan Park, Yelidao, Fisher Girl, lighthouse kunye nezinye iindawo photo Internet indumasi elula kakhulu.
Umbuki zindwendwe ngu- 爱豆
Phendula yonke imibuzo kwaye ayizukukukhathaza kakhulu
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R500